China Polyethylene Glyeol 300 PEG 300 စက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူများ Yinuoxin
Polyethylene Glyeol 300 တံစို့ 300
အဓိကလျှောက်လွှာများ -ဤထုတ်ကုန်သည်အဆိပ်အတောက်ကင်းသော၊ မချုပ်တည်းနိုင်သော၊ ကောင်းမွန်သောရေတွင်ပျော်ဝင်နိုင်မှု၊ လိုက်ဖက်ညီမှု၊ ချောဆီအရည်ကြည်မှု၊ စွဲကပ်မှုနှင့်အပူတည်ငြိမ်မှုရှိသည်။ ထို့ကြောင့် PEG-300 စီးရီးသည်နူးညံ့သောဆေးတောင့်များကိုပြင်ဆင်ရန်သင့်တော်သည်။ ၎င်းသည်ပျော်ရည်အမျိုးမျိုးနှင့်သဟဇာတဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည်ကောင်းမွန်သောအရည်ပျော်ရည်နှင့်ပျော်ဝင်နိုင်သည့်အရာဖြစ်ပြီးပါးစပ်ဖြေရှင်းချက်၊
အရည်အသွေးစံ - CP2015
သိုလှောင်ခြင်းနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး - ဤထုတ်ကုန်သည်အဆိပ်အတောက်ကင်းသော၊ မီးလျှံတားဆေးဖြစ်သည်၊ ဓာတုပစ္စည်းများအားယေဘုယျအားဖြင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊
ဇီဝဆေးပညာ application များ
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ polyethylene glycol ကိုလည်း polyethylene oxide (PEO) အဖြစ်လူသိများသည်။ linear polyether Ethylene oxide ကိုလက်စွပ်ဖွင့်လှစ် polymerization အားဖြင့်ရရှိသောခဲ့သည်။ ဇီဝဆေးဝါးကုသမှုနယ်ပယ်တွင်အဓိကအသုံးပြုခြင်းများသည်အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်
1. ဆက်သွယ်ရန်မှန်ဘီလူးဖြေရှင်းချက်။ polyethylene glycol aqueous ဖြေရှင်းချက်၏ထဲမှာပါတဲ့ညှပ်နှုန်းကိုအထိခိုက်မခံသည်နှင့်ဘက်တီးရီးယား polyethylene glycol အပေါ်ကြီးထွားရန်မလွယ်ကူပါ။
2. ဒြပ်ချောဆီ။ Ethylene အောက်ဆိုဒ်နှင့်ရေငွေ့ရည်ဖွဲ့ပေါ်လီမာ။ ရေတွင်ပျော်ဝင်နေသောမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ဆေးဆီမွှေးကိုပြင်ဆင်ရန်အတွက်၎င်းသည်ဆေးထိုးဆေးပြင်ဆင်မှုအတွက် acetylsalicylic acid, caffeine, nimodipine နှင့်အခြားပျော်ဝင်နေသောဆေးဝါးများ၏ solvent အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။
၃။ မူးယစ်ဆေးဝါးဖြန့်ဝေခြင်း၊ polyethylene glycol aqueous solution ကိုဆေး၏အပြင်ဘက်အလွှာတွင်ကပ်သောအခါဆေး၏မူးယစ်ဆေးဝါးပျံ့နှံ့မှုကိုထိရောက်မှုရှိစေရန်ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပေါ်လီမာပစ္စည်းများ 4. Surface ပြုပြင်မွမ်းမံ။ ဆေးနှင့်သက်ဆိုင်သောဆေးဘက်ဆိုင်ရာပေါ်လီမာပစ္စည်းများ၏ဇီ ၀ လိုက်လျောညီထွေမှုသည်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပေါ်လီမာပစ္စည်းများမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် polyethylene glycol ပါဝင်သော amphiphilic copolymer ကိုစုပ်ယူခြင်း၊
5. alkanol တားဆေးရုပ်ရှင်လုပ်ပါ။
hydrophilic anticoagulant polyurethane ၏ 6. အဘိတ်။
၇။ Polyethylene glycol 4000 သည် osmotic laxative ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် osmotic ဖိအားကိုတိုးစေသည်၊ ရေစုပ်ယူနိုင်သည်၊ ထိုင်ခုံကိုပျော့ပြောင်းစေသည်၊ အသံအတိုးအကျယ်တိုးစေသည်၊ အူသိမ် peristalsis နှင့် defecation ဖြစ်သည်။
၈ ။ Polyethylene glycol သည်အဆိပ်အတောက်ကင်းမှုနှင့် gelling ဂုဏ်သတ္တိများကြောင့်သွားတုပြုပြင်ခြင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။
၉။ PEG 4000 နှင့် PEG 6000 တို့ကိုဆဲလ်ပေါင်းစပ်ခြင်း (သို့) protoplast ပေါင်းစပ်ခြင်းများကိုတိုးမြှင့်ရာတွင်အသုံးပြုသည်။ တံစို့သည်ဖြေရှင်းချက်အတွင်းရှိရေကိုစုပ်ယူနိုင်သဖြင့်၎င်းကိုလည်း၎င်းကိုဖြေရှင်းနိုင်သည်။
၁၀။ ပရိုတိန်းမော်လီကျူးများကိုလေ့လာသည့်စမ်းသပ်ချက်တွင်လူအုပ်အတွင်းရှိပရိုတိန်းဖွဲ့စည်းပုံအပေါ်လွှမ်းမိုးမှု၏လွှမ်းမိုးမှုကိုစစ်ဆေးရန်အတွက် in vivo ဝိုင်းရံနေသောပတ်ဝန်းကျင်ကိုကျွန်ုပ်တို့တုပနိုင်သည်
အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ အသွင်အပြင် （25 ℃） အရောင်Pt-Co HydroxylvaluemgKOH / ဂရမ် မော်လီကျူးအလေးချိန် ပေါင်းစည်းရေးအမှတ်℃ ရေပါဝင်မှု （%） PH တန်ဖိုး၁% ရေအဖြေ）
တံစို့ -၃၀၀ အရောင်မရှိသောပွင့်လင်းအရည် ≤20 340 ~ 416 270 ~ 330 - .50.5 5.0 ～ 7.0
မှတ်ချက်များ ငါတို့ကုမ္ပဏီလည်း PEG စီးရီးထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုးပေးပါသည်။
ရှေ့သို့ Carbopol 940
နောက်တစ်ခု: Carbopol 20
တံစို့ 4000 Polyethylene Glyeol 4000
တံစို့ 600 Polyethylene Glyeol 600